ịkpụcha mbọ aka nke spandex
Mkpịsị bụ ngwa eji achọ ihe. Na -apụtakarị na uwe, uwe ime, akwa ụlọ. Mkpịsị ahụ dị gịrịgịrị na ịkwa akwa. A na -ejikarị akwa lace eme uwe ime ime oge okpomọkụ. Mkpịsị na uwe ahụ nwere ike ịmepụta mmetụta dị ụtọ. Mkpịsị akwa dị n'ụlọ na -agbakwụnye mmetụta na -atụghị anya ya n'ụlọ. A na -agbakwunye akwa ụlọ nke nwere lace, nke na -agbakwụnye mmetụta nke ịbụ onye isi na textiles ụlọ. Yabụ kedu ka anyị si amata ịdị mma mgbe ịzụrụ ngwaahịa lace?
Mpụta mbụ. Ihe ndina akwa silk dị mma, nwere ahịrị doro anya, mbipụta zuru oke, na akwa mara mma, na-enweghị mmetụta nke ahịrị ajị ajị na mbipụta siri ike. A na -adụ ndị na -azụ ahịa ọdụ ka ịhọrọ ngwaahịa nwere agba dị larịị ma ọ bụ hue eke, n'ihi na ha adịghị mfe ịre. Ụfọdụ ngwaahịa nwere agba siri ike nwere ike ịbelata ngwa ngwa n'ihi nnukwu agba. Na mgbakwunye, enwere ule dị mfe: tinye otu akwa akwa na ngwaahịa a wee tee ya ihu na azụ. Ọ bụrụ na ịchọta akara ọ bụla nke ịcha akwa ọcha, ọ ga -apụ n'anya.
Nke abụọ bụ isi. Isi nke ngwaahịa dị mma na -adịkarị ọhụrụ na eke na -enweghị isi pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị mepee ngwugwu wee nụ isi ísì dị ka isi na -esi ísì, ọ nwere ike bụrụ n'ihi na formaldehyde ma ọ bụ acidity dị na ngwaahịa a karịrị ọkọlọtọ, yabụ ọ kacha mma ka ị ghara ịzụta ya. Ka ọ dị ugbu a, ụkpụrụ amachibidoro maka uru pH nke textiles bụ 4.0-7.5. N'ikpeazụ metụ udidi ahụ.
Ikpeazụ bụ ịkwọ aka. Ngwaahịa dị mma na -enwe ahụ iru ala ma dịkwa nro, na -esi ike, ọ naghị enwe mmetụta siri ike ma ọ bụ na -atọpụ ya aka. Mgbe a na -anwale ngwaahịa owu dị ọcha, enwere ike ịdọta filaments ole na ole iji mụnye ọkụ, ọ na -adịkwa mma ka ha na -ewepụta isi akwụkwọ na -ere ọkụ mgbe ha na -ere ọkụ. Ị nwekwara ike iji aka gị tụgharịa ntụ. Ọ bụrụ na enweghị akpụ akpụ, ọ pụtara na ọ bụ ngwaahịa owu dị ọcha. Ọ bụrụ na enwere akpụ, ọ pụtara na o nwere eriri kemịkal.
Oge ezipụ: Mee-26-2021